(Xog) Yaa ka danbeeyay xil ka qaadistii lagu sameeyay Axmed Ciise Cawad? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Xog) Yaa ka danbeeyay xil ka qaadistii lagu sameeyay Axmed Ciise Cawad?
(Xog) Yaa ka danbeeyay xil ka qaadistii lagu sameeyay Axmed Ciise Cawad?
MW Farmaajo oo fulinaya codsiga Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Balal Cusmaan ayaa amray ugu dhiibay RW Rooble, Xoghayaha Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Cabdirasaq Caato. Caato ayaa maalintii shalay gelinka danbe u tagay RW Rooble una sheegay in uu xilka ka qaado Wasiirka Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad, isla markaana magacaabo Maxamed Cabdirasaq.
RW Roble aya u cuntami weysay farriinta loo soo dhiibay Caato wuxuuna qadka Whatsupka ka wacay laba jeer MW Farmaajo oo markii danbe ka qabtay. RW Roble ayaa u sheegay in Caato uu u keenay amar uu ii sheegay in aad adiga u soo dhiibtay, maxaa arrinta ka jiro? Ayuu weydiiyay. MW Farmaajo ayaa ugu jawaabay, waa sax amarkaas, fadlan fuli sida ugu dhaqsaha badan maanta. RW Roble ayaa damcay in uu MW Farmaajo ku qanciyo in aay is arkaan marka hore balse Farmaajo ayaa u sheegay in uu mashquul yahay.
Intii labada masuul aay ku wada hadlayeen qadka Telefoonka ayaa waxaa xafiiska RW Roble ku soo noqday Cabdirasaq Caato oo wada warqaddii xil ka qaadista & magacaabidda wuxuuna u dhiibay RW Rooble, isagoo weliba si jees jees ah u hadlaya ayuu yiri “Mudane hadalkeyga hubin uma baahna ee warqadaha saxiix” Wuxuuna isla markiiba u yeeray Wasiirka Warfaafinta Dubbad wuxuuna ku amray in xafiiska degdeg ugu yimaado.
Qabyaaladda iyo aqoondaradda dowladnimo ee Farmaajo waxaa ka markhaati ah in laba wiil oo isaga ku reer ah ay waxay doonaan ka sameyn karaan ciddey rabaan ceyrin karaan. Cabdirasaq Caato ayaa hore looga ceyriyay xafiiska Raisul Wasaaraha waxaana laba usbuuc kaddib mar kale loo magaacabay xafiiskii laga ceyriyay.
Axmed Ciise Cawad ayaa loo magacaabay “Isku xiraha Xafiiska Madaxweynaha & Wadamada Geeska Afrika & Badda Cas” waxaana xilkaas horey loogu magacaabay Balal Cusmaan oo hadda ku magacaaban Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda, kaasoo ah shaqsigii qoray warqaddii dowladda Somali ku difaaceysay Abiye Axmed & Dowladdiisa isagoon la tashan Wasiirkiisa, kaddibna uu wasiirka amray in warqadda laga saaro webka Wasaaradda & Barta Twitterka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Previous articleBeesha Caalamka oo walaac ka muujisay Guddiyada Doorashooyinka soona saartay 3 qodob
Next articleMaxaa ka soo baxay shirkii shalay ee Golaha Wasiirada Puntland